Xisbigii 2-aad oo ku taageeray DFS sida ay ugu jawaabtay Kiinya – Kalfadhi
Xisbigii 2-aad oo ku taageeray DFS sida ay ugu jawaabtay Kiinya
February 18, 2019 Kalfadhi
Xisbiga Midowga Nabadda iyo Hormarka (UPD) ayaa war uu goordhaweed soo saaray ku garab istaagay Xukuumadda Federaalka Soomaaliya (XFS) sida ay u abaartay ka jawaabista go’aanka ay Kiinya ku hakisay Xiriirkii Diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kiinya. Xisbigan, oo uu hogaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud, waxa uu soo saaray warsaxaafadeed ka kooban 5 qodob oo kala ah:
1. Inuu soo dhawnayo mowqifka ay XFS uga jawaabtay cabashada Kiinya
2. Inuu u soojeedinayo in XFS ay shacabka la wadaagto xogaha rasmiga ah ee Sahminta Shidaalka dalka
3. Inuu ku boorinayo XFS in ay dhaliisha Xisbiyada Siyaasadda u qaadato in iyada lagu saxayo
4. Inuu ku baaqayo in la dejiyo xiisadda diblomaasiyadeed, lagana war sugo go’aanka Maxkamadda Cadaaladda Aduunka
5. Inuu Xisbiga UPD aaminsan yahay siyaasad ku saleysan deris wanaag, nabad iyo xasilooni ku wada noolaansho
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, oo ah Guddoomiyaha Xisbiga UPD, Xasan Sh. Maxamuud
Xisbiga UPD waxa uu sheegay inuu xoojinayo go’aanka dowladda ee ah iney Soomaaliya xaq u leedahay gacan ku haynta, ka talinta iyo go’aan ka gaarista xudduudaheeda iyo kheyraadka ku jira. Wuxuuna si la mid ah warkii ay xalay dowladdu soo saartay uu u sheegay in xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kiinya uu yahay soojireen ay tahay in la wada dhawro.
UPD waxaa, iyada oo fasireysa sababta ay ugu baaqeen in aysan XFS shareysan dhaliilaha xisbiyada, ay sheegeen iney doonayaan iney toosiyaan dowladda, oo ay ka digaan wixii danaha dhaqaale, siyaasad iyo kuwo istiraatiijayadeed ee uu dalku leeyahay waxyeeleyn kara, waxaana warsaxaafadeedkooda ay markale ku xuseen inuu 7-dii bishan ka dhacay Ingiriiska Xaraashid Shidaalka Soomaaliya.
Dhigaalka Warsaxaafadeedka Xisbiga UPD